Mayelana NATHI - Shijiazhuang Tuoou Construction Materials Trading Co., Ltd.
SHIJIAZHUANG TUOOU IZAKHIWO ZOKWAKHA ZOKUHWEBA CO., LTD
Shijiazhuang Tuoou Construction Materials Trading Co., Ltd yasungulwa ngo-2012, etholakala shijiazhuang edolobheni esifundazweni hebei eduze tianjin xingang.
Igxila ekukhiqizeni zonke izinhlobo ze-villa yensimbi ekhanyayo, indlu yesitsha, indlu elula, indlu ephathekayo, indlu yezesekeli. Ifektri yethu izibophezele ekuhlinzekeni ukwakhiwa kwezindlu okuyimoduli, ukuthengisa, ukukhiqiza kanye nokufakwa kwezixazululo zokuma okukodwa.
Ifektri yethu inamandla okukhiqiza athuthukile, ukuphathwa okuhle kokukhiqizwa kwe-tpm, amandla obuchwepheshe obuchwepheshe, amandla aphezulu we-R & D nendawo yokulawula ikhwalithi ezimele.
Imikhiqizo ibeka unyawo emikhiqizweni esekelwayo yamaphrojekthi, njengezingxenye ezikhethekile ezimise okwenziwe ngokwezifiso, ibhodi lokwakha, ipuleti lombala kanye namashidi wensimbi lukathayela, amapaneli wensimbi yensimbi anombala (i-polyurethane, i-EPS, i-Rockwool, ingilazi yoboya beglasi, amapaneli egumbi lesamishi elihlanzekile), ukuhlobisa phansi, insimbi isakhiwo, imikhiqizo yensimbi njll.
UTuoou unake ukuthuthukiswa kwamakhono akhe ocwaningo lwesayensi, futhi adale indawo enhle yokuthuthuka okuqhubekayo kwamakhono ocwaningo lwesayensi. Kuze kube manje, besesiwine izitifiketi eziyisihlanu zemodeli yokusetshenziswa kobunikazi ngokwesakhiwo sezindlu.
I-Tuoou ihlanganisa ukunikezwa kwempahla eluhlaza, ukuthuthukiswa komkhiqizo, ukukhiqizwa, ukuthuthwa, ukufakwa nezinsizakalo zokulandelela. Izibophezele ekunikezeni amakhasimende izixazululo ezisezingeni eliphakeme zokuhlala nezentengiselwano ezisezingeni eliphakeme. Izinsizakalo ezinhle zokugcinwa kolwandle nezinsiza zangaphakathi ezisekela izinsizakalo zisenza sibe nethuba lokuncintisana kontanga.
I-Tuoou isungule isikhungo esizimele sokulawula ikhwalithi, esisebenza kakhulu ekuhlolweni kwezinto ezibonakalayo, ukuhlolwa kwezinto ezisizayo, ukuhlolwa komkhiqizo, ukuhlolwa kwenqubo nokuhlolwa kwelabhorethri. Iqembu lisebenzisa izindlela zokuthola ezisebenzayo ukulandelela nokulawula yonke inqubo yokukhiqiza, nokulawula ngokuqinile izinto ezingenayo. Izinsizakusebenza zokuhlola ezithuthukisiwe kanye nezinqubo zokuhlola ezijwayelekile zomhlaba wonke ziqinisekisa ukunemba nokubekwa emaceleni kwedatha yokuhlola futhi kuthuthukisa ukuthuthukiswa kwekhwalithi yomkhiqizo.
UTuoou uzibophezele ekuhlinzekeni ngezinsizakalo ezisezingeni lokuqala nezisebenza kahle ngaphambi kokudayiswa nangemva kokuthengiswa, okuthathe idumela elihle kumakhasimende ethu emhlabeni jikelele.
Sithumele emazweni amaningi e-Southeast Asia, Europe, Africa, Australia, Central America, South America njll.